दयाहाङ ‘नेप्टे’ का गब्बर सिंह ? – mero sathi tv
दयाहाङ ‘नेप्टे’ का गब्बर सिंह ?
On २१ चैत्र २०७४, बुधबार १३:१७
यस वर्षका लागि अन्तिम फिल्म ‘नेप्टे’ लिएर आउँदैछन् अभिनेता दयाहाङ राई । यो फिल्म चैत ३० गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसमा उनले पहिलो पटक नेगेटिभ क्यारेक्टर निभाएका छन् । फिल्मको ट्रेलरबाट पनि धेरथोर प्रष्ट हुन्छ ।
उनले फरक भूमिका निर्वाहा गर्ने सोचका कारण ‘नेप्टे’ मा खलपात्रको भूमिका निर्वाहा गरेको बताए । बुधवार राजधानीमा पत्रकारसँग कुराकानीको क्रममा उनी भन्छन्, ‘केही फरक गरुँ भन्ने लागेको थियो । यसबीच ‘नेप्टे’ मा फरक भूमिका भेटेँ । म आफैंले उक्त क्यारेक्टर रोजेको हुँ । यसमा मेरो भूमिका न नेगेटिभ न त पोजेटिभ नै हो । के हो भन्ने कुरा त दर्शकले मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ।’
उनले नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्नमा झन् मज्जा आउने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘नेप्टे’ मा मेरो डार्क साइडमात्र देखाइएको हुँदा भिलेन जस्तो लागेको हो । एउटा गलत कामले गर्दा उसलाई समाजले नराम्रो सम्झन्छ । फिल्ममा उसले गर्ने राम्रा कामहरु पनि देखाइएको छ । भिलेन भन्दै गर्दा डरलाग्दो क्यारेक्टर भने छैन ।’
फिल्मका निर्माता तथा कलाकार रोहित रुम्बा, दयाहाङलाई ‘नेप्टे’ को गब्बर सिंह भन्दछन् । उनी भन्छन्, ‘फिल्मको ऊ हिरो र भिलेन दुबै हो । फिल्ममा उसको क्यारेक्टर स्टाइलिस छ । दयाको इन्ट्री हुँदा डर होइन दर्शकले मनोरञ्जनको प्याकेज भेट्छन् ।’
उनी दयाहाङका कारण फिल्ममा आफू ओझेलमा परेपनि खुसी हुने तर्क राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘दयाहाङले जुन क्यारेक्टर रोज्यो त्यसका लागि म उसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले हिजो मात्र पूरा फिल्म हेरेँ । फिल्मभरी दयाहाङ छाएको छ । उसको कारण म ओझेलमा भन्दा पनि उसको कारणले मलाई चाहीँ फाइदा हुन्छ ।’
देव कुमार श्रेष्ठ निर्देशित यस फिल्मको ‘सुपारी काँचो’ गीत र कमेडी ट्रेलरले यतिबेला फिल्मको चर्चा थप चुलिएको छ ।
दयाहाङ राई, रोहित रुम्बा, छुल्ठिम गुरुङ्ग, ए गुरुङ, वुद्दि तामाङ, पूर्णिमा लामा, अरुणा कार्की, प्रनिशा सिलवाल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको ‘नेप्टे’ का निर्माता रुम्बा आफैं हुन् ।
यिनै हुन् बागी–२ का अभिनेता ज्याकी श्राफका छोरा टाइगर श्राफ